दाइजो नपाउँदा हत्या ! (भोर प्रोमो हेर्नुस्) « Ramailo छ
दाइजो नपाउँदा हत्या ! (भोर प्रोमो हेर्नुस्)
‘झोला’ निर्देशन गरेका यादवकुमार भट्टराई निर्देशित फिल्म ‘भोर’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । तराईमा व्याप्त दाइजो प्रथाको कथालाई उठान गरेर फिल्म निर्माण गरिएको छ । नयाँ बर्ष २०७५ को छेकोमा निर्माण टिमले दर्शकलाई उपहार स्वरुप ट्रेलर रिलिज गरेको हो । प्रोमो हेर्नुस् :
फिल्ममा दाईजोलाई महिला हिंसा मात्र नभई मानव हिंसाकैै सामाजिक कुरुतिको रुपमा प्रस्तुत गरिएको निर्देशक भट्टराईको भनाइ छ । फिल्मको कथा साहित्यकार तथा झोलाकै कथाकार कृष्ण धरावासीले लेखेका हुन् । पटकथा निर्देशक भट्टराईकै छ । आउँदो बैशाख २१ गतेदेखि फिल्म हलमा लाग्नेछ। फिल्ममा राम नारायण ठाकुर, अनिता रानी मण्डल, प्रमेश झा, डली सरकार, पूजा कर्ण, मदन ठाकुर, विष्णुकान्त झा लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।
फिल्मको छायाँकन दीपक बज्राचार्यले गरेका हुन् भने राज तिमिल्सिना र राम गोपाल थापाले निर्माण गरेका हुन् । फिल्मका कार्यकारी निर्माता देवेन्द्र प्रसाद सुवेदी छन् । उज्जल ढकालले फिल्मलाई सम्पादन गरेका छन् ।